Warbixin Xiiso leh: Macalinkii xishoodka badnaa ee madaxweynaha noqday! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Warbixin Xiiso leh: Macalinkii xishoodka badnaa ee madaxweynaha noqday!
Warbixin Xiiso leh: Macalinkii xishoodka badnaa ee madaxweynaha noqday!
Tunisia (Halqaran.com) – Macalinkii hore ee jaamacadda ayaa u muuqday inay ku adagatahay inuu soo jiidto qalbiyada da,yarta reer Tunisiya ee shaqa doonka ah.
macallinkii xushoodka badnaa oo madaxweyne noqday